Nacho oo sheegay in ay layaab ku noqotay, kadib marka uu maqlay in Zidane uusan kooxda ku sugnaan doonin xili ciyaareedka soo aadan – Gool FM
(Real Madrid) 05 Juunyo 2018. Xidiga kooxda Real Madrid Nacho Fernandez ayaa qirtay inay layaab ku noqotay kadib markii uu maqlay in Zinedine Zidane uusan noqon doonin tababaraha Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda.
Nacho Fernandez ayaa wareysi uu saxaafada inta uu ku gudi jiray xerada tababarka xulkiisa qaranka Spain uu ugu diyaar garoobayo koobka aduunka 2018 ee 14-ka bishan ka bilaabi doona dalka Russia.
“Waxay ahayd dharbaaxo xoogan ee aan la kulanay dhamaan tayada, Zinedine Zidane wuxuu inoo ahaa muhiim”.
“Kalsoonida uu nasiiyay ayaa ah mid cajiib ah, shaqsi ahaan wax badan ayuu Iga siiyay Real Madrid, dhab ahaantii wuxuu leeyahay asbaabtiisa, sababtoo ah waxa uu inoo sameeyay iyo waxa uu inoo qabtay, kaliya waxaan u sameyn karnaa inaan taageerno”.
Zinedine Zidane ayaa wuxuu si layaab leh ugu dhawaaqay inuu iska casilay shaqada tababarka kooxda Real Madrid kadib markii uu kula guuleestay koobkiisii saddexaad xiriir ah ee Champions League.
Fred oo fariintiisa ugu horeesay u diray jamaahiirta kooxdiisa cusub ee Manchester United